Maalgelin 2,6 bilyan sannadka 2018 - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirka maaliyadda Magdalena Andersson (S) sawir: Fredrik Sandberg/TT
Maalgelin 2,6 bilyan sannadka 2018
La cusbooneeyay måndag 16 april 2018 kl 10.54
La daabacay måndag 16 april 2018 kl 09.05
Maal-gelin hor leh oo gaarsii-san 2,6 bilyan oo lagu kabi doono miisaaniyadda 2018 oo maanta la soo ban-dhay.
Maal-gelinta miisaaniyadda lagu kabeyo ayay ka mid yihiin 600 oo milyan oo koronka iswiidhishka ah oo loogu talo galey howlaha dar-yeelka caafimaad iyo 350 milyan oo koron oo loo qoondeeyey dar-yeelka waayeelka.
Dawladda ayaa 200 oo milyan oo dheeri ah ku maal gelin doonta howlaha caafimaadka middaasina oo aan horey loo ogsooneyn. Dhaqaalahaasi oo ay hayad-goboleedyada dar-yeelka caafimaad u adeeg-san doonaan sidii loo shaqaaleeyn lahaa shaqaalaha leh xirfadaha qaaska ah.
-Waxaan maanta soo ban-dhigney miisaaniyad dheeri ah oo 200 oo malyan oo koron gaarsii-san oo loogu talo galey sidii lagu shaqaaleeyn lahaa dadyoow leh xirfado khaas ah, sida ay sheegtay Magdalena Andersson, wasiirka maaliyadda Sweden oo soo ban-dhigtay miisaaniyadda dhameeys-tirka ee guga.
Toddobaadkii ina dhaafay ayay dawladdu shaacisay maal-gelin gaarsii-san 400 oo milyan sidii lagu dhimi lahaa safka loogu jiro howlaha dar-yeelka caafimaad.
Wasiiradda ayaa sidoo kale sheegtay iney 2,6 bilyan ee miisaaniyadda lagu kabayo ay ka mid tahay 10 milyan oo loogu talo galey qiimeeynta shahaadooyinka ajaaniibta:
-Intaa waxaa dheer in aannu ku miisaaniyad gelinayno 10 malyan oo koron qiimeeynta shahaadooyinka caafimaad ee ajaaniibta.
Maadaama si deg deg ah looga baahan yahay goobaha dar-yeelka caafimaad ajaaniibta dalka soo gashey, xaqa u leh deggenaansho, isla-markaana haysta shahaadooyin howlaha dar-yeelka caafimaad, sida ay sheegtay.
Maal-gelinta ayey sidoo kale ka mid yihiin sidii dhallin-yarada loo siin lahaa shaqooyin xilliga kuleeylaha, waxa lagu magacaabo sommarjobb, qalab cusub oo ciidanka ammaanku yeesho iyo taageero sidii loo soo saari lahaa tamarta lagu magacaabo biogas (tamar laga sameeyo haraaga cunnada iyo haraaga warshadaha lagu nadiifiyo bullaacadaha).
Miisaaniyadda la soo ban-dhigo guga ayay macnaheedu tahay sidii loo sixi lahaa miisaaniyaddii waynayd ee sannadka. Is-bedelladaasina oo salka ku haya dhacdooyin aan horey loo og-sooneyn. Inta badan waxay salka ku haysaa kharash hor leh oo aan horay loogu xisaabtamin miisaaniyaddii ballaarnayd ee dayrta oo middan ka horreeysay.
Dawladda ayaan u qiimeeyn kharashaadka kor u kacay ee miisaaniyadda guga maal-gelin howlo cusub ee dawladdu soo ban-dhigayso.